» नेपाल आईडलमा नेशन पुन मगरलाई सर्वाधिक भोट
नेपाल आईडलमा नेशन पुन मगरलाई सर्वाधिक भोट
१९ माघ २०७६, आईतवार ०७:००
मकवानपुर, १९ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल आईडल’ सिजन ३ मा पोखराका नेशन पुन मगरले सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका छन् । गत हप्ताको प्रस्तुति पश्चात खुलेको भोटिङमा उत्कृष्ट १२ मा परेकाहरुमध्ये नेशनले सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका हुन् । दर्शकहरुले उनको प्रस्तुतिलाई रुचाएर सर्वाधिक भोट गरेका हुन् । ‘हाईएस्ट भोटेट कन्टेस्टेन्ट’ बनेसँगै नेशनले हिमालय एलोभेराको तर्फबाट पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । उनी उत्कृष्ट ११ को लागि छनौट भएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
गत शुक्रबार नेशनले बिपुल क्षेत्रीको आवाजमा रहेको ‘डढेलो’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । नेशनको भोटिङ कोड एनआई ०८ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०८ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधि दाबेदारका रुपमा हेरिएका नेशन पुन मगर पोखराका हुन् । दमदार आवाजका कारण चर्चा कमाउन सफल नेशन २० वर्षका छन् । सानोमा फुटबलमा रुचि भएता पनि उनका बुवाले उनलाई फुटबलको सट्टा गितार किनिदिए अनि दाईले गितार सिकाईदिए । त्यसपछि नै उनी संगीतको यात्रामा सरिक भएका हुन् । औपचारिक रुपमा संगित नसिकेतापनि उनले अनलाईनबाट संगीत बारे धेरै कुराहरु सिकेका छन् । विभिन्न कभर गीत समेत गाएका नेशनले अहिलेसम्म आफ्नै गीतभने सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनी पोखराको ‘एमपी’ ब्याण्डमा आवद्ध छन् । यसअघि नेपाल आईडलको दोस्रो सिजनमा समेत सहभागी भएका उनले पोखरा अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे पनि जितेका थिए । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।